The achọghị - Part 19 | Apg29
Michael bụ pụrụ iche akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ. Ọ dịghị mgbe m maara ya. Amaghị m ya ndabere ma ọ bụ onye ọ bụ n'ezie, ihe karịrị nke a, na m na-aghọta na ndị nkụzi o weere dị ka a imetosi ma na ike na-amụrụ.
Mgbe m na klas nkụzi mba elu ọnụ nke ya, ya mere ọ kpọọrọ m n'ezie na-agbachitere. Otu oge mgbe nke a mere, ọ bụ ọzọ na-amụrụ ndị ike emegbu m. O wee were m na-agbachitere na-agbalị ịkpọrọ onye a na ikpere ya ka ọ na ọdụ na bench na a ole na ole ndị ọzọ na paseji anọghị na klas n'oge a ezumike. Ọ bụghị otú omume ọma mere, ma m na-eguzo tụrụ na n'akụkụ na dị nnọọ na-ekiri. M na-amaghị ihe na-ekwu banyere ọnọdụ a. M na-echeta na o kwuru ị na-ekwesịghị tiis Chris, ma i kwesịrị inwe obiọma ya, na mgbe ọ na-etinye ya abụọ na ikpere ya azụ dị nnọọ kewapụrụ ya ala na bench nke ya ibu ibu.
Michael bụ ịbụ na obi a nnọọ obiọma onye na nwere ezi obi ma nnọọ rowdy na-eru unyi. Ọ gara otu ụlọ akwụkwọ ụgbọ ala dị ka m. Ọ steepụ na onye nnù tupu ebe m nwetara na na a ugbo na Skeen na-aga abụọ mile Ljungby.
Otu ehihie mgbe anyị gara n'ụlọ na nnukwu SJ ụgbọ ala bụ Michael na a enyi ya nnọọ ọcha. Ha romped, na-eti mkpu na jupụtara efehe azụ na-apụta na-ekpe ọwa nke wara wara nke ụgbọ ala, mgbe niile ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ nọdụrụ nwayọọ ha nọ n'oche ha, na anwa anwa ikwu ihe ọ bụla. The abụọ na-eto eto n'ụzọ dị otú adia bọs na-ekwere na ha "were bọs" na nwere ike ime ka ha mma. The abụọ zuru mile m wee na ụgbọ ala tupu m apụ na m na-akwụsị, ha wee na-mgbe na-bọs ndidi gwụrụ ọzọ na ndị ọzọ site na nkeji na anya ruru ya ókè.
N'echi ya, Michael gwara m na obi ike n'ihi m, ka anyị nọ na otu bench, ọ enwe ndị Ihọd, ihe mere na ụgbọ ala mgbe m rịdata. The bọs onye ndidi chụpụrụ bọs akpatre nnọọ iwe na ọ kwara na iwe na ẹsịn Michael na enyi ya ebe n'okporo ụzọ tupu ha ruru ha akwụsị.
M kwuru ihe ọ bụla banyere nke a, ma n'ụzọ ụfọdụ na m maara na bọs enweghị oke ma na-eme ihe o mere. I kwesịrị ịma na n'oge ahụ, m enweghị echiche. Adịghị m now ma ọ bụ baa, m nnọọ ntị ma gbalịa ile ihe ndị dị ka ihe kasị mma m nwere ike. Abụghị m onye na nyocha, m na-amaghị ihe ọ ga-abụ ma ọ bụ n'ụzọ ọ bụla na m guzo na sidelines na dị nnọọ na-ele. Ọ bụghị m na ejije na isi agwa, ma naanị a jụụ chịkwaa na-eme ihere na obi erughị ala obere, ihe na-adịghị amaja egbochi.
Gịnị n'ezie mere ọzọ na ogologo skranglige stökige nwa okorobịa na-eji ike emegbu m na e we na site onye nkụzi m, m na-amaghị mgbe ọ na-abịa nkọwa. Ma, gịnị mere bụ nnọọ ihe mwute na obi ọjọọ. Ọ ga ujo dum na ụlọ akwụkwọ na ụmụ akwụkwọ ga-eche ihe ọjọọ na akụkọ ga-ede banyere ya. Karịsịa, na m maara na a nwa klas m kwuru na ya a afọ mgbu nke ihe omume.
Michael na a enyi ya aha ya bụ Patrick e si na-eje ije otu mgbede n'ime obodo ebe ha bi. Ha na-enwe abụọ ma ọ bụ atọ ndị ọzọ na-eto eto bụ ndị na-nọ na na fateful mgbede. Otu n'ime ha nwere a agbụ ígwè na ya dị ka ọ na mbụ na mgbede zuuru si a azụmahịa. Ọ bụ a yinye na-emechi ego na njedebe nke ndibiat.
Mgbe nsogbu ndị a na-eto eto Michael ya na ya so. Michael e tiri ihe ike na brutally na yinye. Enyi ya Patrick ọsọ n'olu n'elu isi. Ọ anwụghị, ma Michael agha ọbara nwụọ site na obi ọjọọ eti eti nke yinye.
My nzukọ Michael malitere bụghị otú ezi, mgbe ahụ, m kụrụ a nosebleed na ya, dị ka m gwara gị na akụkụ ikpeazụ. Ma, anyị ghọrọ enyi ma akwanyere onye ọ bụla ọzọ, ee, ọbụna ọ gbachiteere m n'ihu ndị ọzọ mgbe ha na-eji ike emegbu m. M na-eche Michael nwere ezi obi, n'agbanyeghị eziokwu na bọs ka nọkwa na-ewe iwe na ọ kwara ka ọ chụpụ Michael na enyi ya.
M n'ezie wee a na enyi a obere oge tupu a obi ọjọọ ụzọ, na e wepụwo ụwa.
The akwụkwọ ọkọlọtọ e ji ọkara poolu.
All mbak otú anya na-achọghị